Ururka Warbaahinta | Somali Media Mapping
QODOBKA 19aad waa hay’ad xaquuqda aadanaha ee caalamiga ah, taas oo difaacda korna u qaada xoriyatul qowlka iyo xoriyada macluumaadka adduunka oo dhan.
Committee to Protect Journalists waa urur samofal oo ah oo madax banaan oo la socota xadgudubyada ka dhanka ah saxaafadda iyo kor u qaadida xoriyadda saxaafadda adduunka.
East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project Africa (EHAHRDP) waa urur kuwaasoo doonaya in ay xoojiyaan shaqada difaacayaasha xuquuqda aadanaha (HRDs) gobolka oo dhan iyagoo hoos u dhigaya kuwa u nugul qatarta ah in ay cadaadis la kulmaan iyo kobcinta awoodda si wax ku ool leh loo difaaco xuquuqda aadanaha.
Mashruuca East and Horn of Africa Human Rights Defenders ayaa hadda diiradda saaraya wadamada sida Burundi, Jabuuti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Soomaaliya (oo ay ku jirto Somaliland), Koonfurta Sudan, Sudan, Tanzania iyo Uganda.
Ururka Qaran ee Suxufiyiinta Soomaaliyeed (NUSOJ) waa midowga la aasaasay bishii August 2012 si kor loogu qaado loona ilaaliyo xoriyadda saxaafadda iyo danaha suxufiyiinta, kaddib markii lagu dhawaaqay lana sameeyey oo ay diyaarisay Dowladda Federaalka Kumeel Gaarka Soomaaliya oo ansixisay sharci warbaahineed oo cadaadis ku dhisan.
MAP waa urur kaas oo la tacaalaya xuquuqda saxafiyiinta gobolkan.
Muqdisho Media House waa xarun aan faa’ido doon ahayn oo aan ahayn mid siyaasadeed. Waxa aasaasay koox waxgarad ah ee jooga magaalada Muqdisho 20kii April 2010 si kor loogu qaado warbaahinta iyo suxufiyiinta Muqdisho.
International Freedom of Expression Exchange (IFEX) waa shabakad caalami ah oo ku dhowaad 90 hay’adaha aan dawliga ahayn horumarinayso isla markaana difaaceysa xaqqa xoriyatul qowlka. IFEX ayaa weydaarsanaysa macluumaadka onlineka ah waxayna abaabuleysaa tallaabo ku saabsan arimaha sida xoriyadda saxaafadda, faafreebka Internet, xorriyadda sharciga macluumaadka iyo sharciyada caynta,-fiirsashada warbaahinta iyo weeraro loo geysto suxufiyiinta, qorayaasha, difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo dadka isticmaala internetka.
The International Federation of Journalists (IFJ) ayaa sare u qaada talaabooyin caalami ah si loo difaaco xoriyadda saxaafadda iyo cadaaladda bulshada iyadoo la isticmaalayo ururada shaqaalaha madaxa banana ee saxafiyiinta.
The International Press Institute waa shabakad caalami ah oo ka kooban tafatirayaal, mareeyayaasha warbaahinta iyo saxafiyiinta magaca leh. Iyagoo dadaalkooda ku waajahaya ka-wadashaqaynta iyo ilaalinta xoriyadda saxaafadda, ilaalinta xoriyada xagga ra’yiga iyo hadalka, kor u qaadida socodka xorta ah ee wararka iyo macluumaad, iyo horumarinta hawlaha saxaafada.
ITU (International Telecommunication Union) waa hay’ad Qaramada Midoobay oo ku takhasustay wixii macluumaad iyo isgaarsiinta teknoolajiyada – carsiga ah.
The Open Society Justice Initiative wuxuu isticmaalaa sharciga si loo ilaaliyo iyo awood dadka dunida daafaheeda. Iyagoo isticmaalaya maxkamad u dacwoodid, u doodid, cilmi-baaris, iyo gargaar farsamo, Justice Initiative waxay dhiirri-gelinaysaa xuquuqda aadanaha iyo dhisidda awood sharciyeed ee bulshooyinka kala furan. Waxaa ka mid arrimaha ay diiradda saaraan u shaqeynta si wax looga qabto arrimaha xajinta sirta iyo cadaadiskeeda adduunka oo dhan iyagoo taageeraya xoriyada sharciyada macluumaadka iyo la dagaallanka faragelinta dowladda xoriyadda warbaahinta.
Reporters Without Border(RWB,) waa hey’ad aan dowli ahayn oo Faransiiska degan oo caalami ah horumarinaysa isla markaana difaacda xorriyadda macluumaadka iyo xoriyadda saxaafadda.
Right2INFO.org ayaa qorta macluumaad ku saabsan qaab dhismeedka dastuuriga oo sharci ah xuquuqna u leh ah inay warbixin iyo kiis sharci ku shaqeyso in ka badan 80 dal. Waxay diiradda saartaa sharciga wanaagsan iyo dhaqanka isla markaana soo bandhigaysaa barbar-dhig iyo nuqulo kooban oo ku saabsan xaaladda xuquuqda ay iminka u leedahay in la helo macluumaad.Websiteka wuxuu isu keenaa macluumaad ay soo gudbiyeen khubaro ka socda dalal badan.
Somali Exiled Journalists waa urur matalaya suxufiyiinta Soomaalida ee u masaafuray Kenya. SEJASS ayaa doonaya in ay horumariyaan saxaafadda iyagoo noqonaya buundada u dhexeysa dowladda iyo shacabka.
The Somaliland Journalist Association (SOLJA) waa urur lagu doonayo in awoodda warbaahinta Somaliland lagu horumariyo khibrad iyadoo la ilaalinayo xuquuqda ay u leeyihiin xirfadleyda si loo damaanad qaado anshaxa saxaafadda.
2) HORUMARINTA SAAXAFADDA
BBC Media Action waa bar internetka ah oo isticmaala warbaahinta iyo isgaarsiinta si ay u bixiyaan helitaanka macluumaadka ayna abuuraan awood ay siinayaan qaar ka mid ah dadka ugu saboolsan dunida oo dhan inay ka qayb qaataan nolosha bulshada; iyo in ay la xisaabtamaan kuwa xukunka haya.
Freedom House waa urur madax banaa oo u dooda ballaarinta xorriyadda adduunka oo dhan
The Heritage institute for Policy Studies waxaa la aasaasay bishii January ee 2013 oo noqday machadkii ugu horreeya ee madax-bannaan oo aan faa’iido doon ahayn. Machadka oo xaruntiisu tahay caasimadda Soomaaliya Muqdisho ayaa ujeedadiisu tahay in lagu wargeliyo, la saameeyo siyaasadda guud iyo ku dhaqan iyadoo la beegsanayo cilmi-baaris iyo falanqayn, si toos ah ula hawlgalid siyaasad dejiyayaasha iyo u doodid iyadoo la isticmaalayo warbaahinta.
Infoasaid ayaa ahaa mashruuc kaas oo la aasaasay si ay u hagaajiyaan tayada dhinaca bani’aadamnimada iyagoo badinaya xaddiga warbixin sax ah iyo waqtiga la heli karo si samafalayaasha iyo dadka dhibaatada saameysey looga gargaaro iyadoo kor loo qaadayo is-weydaarsiga macluumaadka iyaga u dhexeeya xaaladaha deg deg ah. Si kastaba ha ahaatee mashruucan ayaa dhamaaday dhamaadkii 2012, laakiin weli dhamaan natiijooyinkooda waxay ku qoran yihiin websitekooda.
Internews waa urur aan faa’iido doon ahayn oo caalami ah kuwaas oo ka shaqeeya kor u qaadida awood warbaahinta maxaliga ah ee adduunka si ay dadka u siiso warar iyo macluumaadka ay u baahan yihiin,siisa awood inay isku xirmaan iyo inay sameyso hab codkooda loo maqlo.
Internews Europe Internews Europe ayaa sare u qaada helitaanka macluumaadka ee dunida. Waxaa sidaas u sahla iyagoo xoojiya warbaahinta maxaliga ah iyo nidaamyada macluumaadka, sidaa darteed dhamaan muwaadiniinta ka dhigi kara codkooda in la maqlo, keenta xuquuq siman iyo fahanka arrimaha muhiimka ah.
Integrity ayaa ku dadaaleysa in ay horseed u noqoto dood ku saabsan habka wax cilmi-baarista iyo latalin si sare loogu qaado heerka caalamiga ah, taageero horumarka hay’adaha lana hagaajiyo awoodda cilmi-baarista wadamada aannu ka shaqayno.
IREX loogu talagalay si loo cabbiro awoodda iyo xoogga qaybta warbaahinta wadan walba. MSI waxay tixgelinaysaa oo dhan qodobada ka qayb qaatay in ay warbaahinta noqoto nidaam tayo leh ee saxaafadeed, maamul waxtar leh, sharci taageeraya xoriyadda saxaafadda iyagoo isticmaalaya qiyaasta u dhaxaysa 0 iyo 4. Qiyaasta metelaysa xoogga qaybaha warbaahinta iyo in la falanqeeyo waqti kasta horumarka (ama xaadaha) dalka gudihiisa. Intaa waxaa dheer, dal ama gobol laga yaabaa in la barbar dhigo mid kale. IREX hadda waxay qabataa MSI wadamo gaaraya 80 dal waxayna bilaabeen inay baaritaanka Afrika ku sameeyaan 2006.
NDI waa urur aan dowli aheyn oo faa’ido doon aheyn oo taageera hay’adaha dimuqraadiga ah ee gobolka kasta oo dunida ka tirsan iyagoo shaqeynayay muddo ka badan labaatan sano.
Ujeedooyinka Peck Rory Trust waxay yihiin in ay bixiyaan gargaar wax ku ool ah iyo taageero ugu bixiyaan suxufiyiinta madax banan iyo qoysaskooda dunida oo dhan, si kor loogu qaado magacooda, in la abaabulo daryeelkooda iyo nabadgelyadooda, iyo si ay u taageeraan xaqa ay u leeyihiin in ay si xor ah oo aan cabsi ku jirin wararka u tebiyaan.
UNESCO waxay ka shaqeysaa si ay u abuuraan shuruudaha wada hadalka bulshooyinka, dhaqamada iyo dadyowga oo ku salaysan ixtiraam loo hayo qiyamka la wadaago.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Maalinta Xoriyadda Saxaafadda Adduunka
United Nations Development Program (UNDP) waxay caawisa sare u qaadida nolosha iyo in la dhiso umado adkeysi badan sida Soomaaliya
UNSOM waxaa loo xilsaaray si ay uga caawiyaan dhismaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya tayo dhisideeda, la horumariyo qadderinta xuquuqul insaanka; UNSOM ayaa kormeerta, waxayna ka caawisaa baaritaanada iyo warbixinno u dirtaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay wax kasta oo ku takrifal ama xadgudub xuquuqda aadanaha ama sharciga bani’aadamnimada ee caalamiga ah ee Soomaaliya.